Mareykanka oo Amaanay Hugaanka Somalia - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Mareykanka oo Amaanay Hugaanka Somalia
December 2, 2017 Cali Yare695
Warbixintan ayaa lagu sheegay in dowladda cusub ee Federaalka Soomaaliya ay dadaalkasta ku bixinayso sidii nabad iyo xasilooni waarta loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya,islamarkaana Dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto taageeradeeda ku aadan dhismaha ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.
“Siyaasadeenu waa in aan taageerno dadaalad aay hormuudka ka tahay Dowladda Soomaaliya ee ah in horjoogayaasha iyo maleeshiyada Shabaab lagu dhiirogelinayo in ay is soo dhiibaan, lana soo afjaro Shabaab,anagana taageero ayaan la garab taaganahay dowladda.’’ Ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay Africom.
Taliska Militariga Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in ilaa 9 weerar ay fuliyeen bishii tagtay,taasi oo tirade guud ka dhigaysa 30 weerar oo la qaaday sanadkan,iyadoo mareykanka uu kordhiyay weerarada lagu bartilmaameedsanayo Alshabaab.
Gen. Thomas Waldhauser oo ah taliyaha ciidamada Militariga Mareykanka ee Qaaradda Africa ayaa sheegay in hadafka uu damacsanyahay Mareykanka uu yahay sidii loo heli lahaa dhul nabad ah,dib u heshiisiin iyo iyo dowladdu ay cageheedi isku taagto.
Thomas Waldhauser ayaa yiri,”Sababta ku kalifaysan Mareykanka in uu bixiyo dadaaladan ayaa ah in rajada laga qabo dowladda cusub oo uu hogaaminayo madaxweynaha Maxamed C/llaahi Maxamed Farmaajo ay noqoto mid isku soo celisa midnimadii Soomaaliya,maadaama dalka uu kujiray xaalada burbur ah oo muddo ku dhow 30 sano,kana mid yahay wadamada caalamka ee uu ka jiro musuqa.
Warbixintan ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in saraakiishaMidowga Africa ay la dhacsan yihiin guulaha militari ee ciidamada Soomaaliya,kuwaasi oo la qorsheynayo in ay dhawaan hantaan ammaanka guud ee dalka marka ay baxaan ciidamada Amisom.